Kurota uchibuda Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuparadzaniswa kunogara kuchinetsa mupfungwa, nekuti mushure mezvose hapana munhu anoda kugara. Aya manzwiro asina kugadzikana anogona zvakare kuoneka mukati nyika zviroto uye dzimwe nguva kumuka kwezviitiko zvepasi kugadzirisa semhedzisiro. Uku kunogona kuve kupera kwekudyidzana kana hushamwari, semuenzaniso.
Asi panogona zvakare kuve nezvimwe zvikonzero nei ichi chiratidzo chichionekwa muchiroto chehope. Zvisinei, kuti uwane kududzirwa kwakarurama uye kwakarurama kwezviroto, mamiriro ezvinhu aripo iye zvino anofanira kubvunzwa, kunyanya nemufananidzo wekurota uyu. Ipapo chete ndipo panogona kududzirwa chiratidzo "chekubuda".
Mufananidzo wekurota "kuenda" unoratidzika kune vazhinji vanorota pavanenge vakarara, kazhinji mune dzimwe hope mamiriro. Unogona kutsvaga izvo zvingave zvinotevera:
1 Chiratidzo chekurota «enda» - zviroto zvakajairika pamusoro pechiratidzo
1.1 Kusiiwa nemunhu kuhope
1.2 Kutengeswa nekusiiwa: hope dzinotyisa!
1.3 Kusiyiwa newaimbova mukomana, mutorwa, iko kurota ...
1.4 Kwakanaka muchato. Kana hope dzikaputika ...
2 Chiratidzo chekurota «siya» - dudziro yakajairwa
3 Chiratidzo chekurota «siya» - kududzirwa kwepfungwa
4 Chiroto chiratidzo «siya» - kududzirwa pamweya
Chiratidzo chekurota «enda» - zviroto zvakajairika pamusoro pechiratidzo
Kusiiwa nemunhu kuhope
Kupatsanurwa kwemurume munyika yekurota hazvireve kuti kunogumisa kupera kwehukama; izvi zvinongoitika kana mamwe zviratidzo zvekurota ainewo zvinoreva izvi. Dzimwe nguva kurota kwekusiiwa kunofanirwa kunzwisiswa seyambiro yekuyedza kuvimbika kwevose vari vaviri.
Zvinogonekawo kuti kurota kunoratidza manzwiro echiroto - unogona kutamba nepfungwa yekugumisa hukama iwe pachako kuti usazonzwa kushomeka. Ipapo iwe unofanirwa kutsvaga hurukuro nemumwe wako wazvino. Kana isipo, sewega iwe unoda pfungwa yako yerusununguko.
Kutengeswa nekusiiwa: hope dzinotyisa!
Zvinonyadzisa kutengeswa nekusiiwa nemumwe. Kwete chete muchokwadi, asi munyika yekurota futi, chiitiko ichi chekutengeswa chinonzwa chisina kunaka uye chidiki. Chokwadi, akadaro mamiriro ekurota dzimwe nguva anoratidza kusaruramisira. Iye muroti anogona kuita njodzi yekudonha murudo nemunhu ane zvinangwa zvakaipa uye anotsvaga zvake kubatsirwa.
Chero ani zvake ari muhukama munyika inomuka uye anorota zveumwe mukadzi padhuze nemumwe wake anogona kunge akave nekushuva kwepabonde mavari. Zvisinei, izvi hazvina kugutsikana zvakakwana musangano. Kutaurirana kunotsanangudza newawakaroorana naye kune musoro.
Kusiyiwa newaimbova mukomana, mutorwa, iko kurota ...
Kana iwe ukadzokorora kupatsanurwa kubva kune waimbova mukomana-muchiroto, zvingangoita kuti iko kusaziva kuchiri kubata nechiitiko ichi uye nehukama hwakakundikana. Dzimwe nguva zviroto izvi zvinokonzereswa nemumwe mudiwa; Kurota ipapo unogona kunge uine kusaziva kushushikana kwekuti kusiiwa kunogona kuzvidzokorora.
Kwakanaka muchato. Kana hope dzikaputika ...
Wakasiiwa here muchiroto semwenga kana mwenga paatari? Kuita kunotyisa uye kuodza mwoyo kukuru. Kana muchato ukapera usati watanga nemazvo, izvi zvinogona kunge zviri chiratidzo chekumutsa kukakavara kwehupenyu. Nekudaro, munhu ari kutaurwa anogona kunge asiri kunyanya kuziva nezvematambudziko aya. Kutarisa zvakanyanya kunobatsira kudzivirira chimwe chinhu chakaipisisa kubva pakuitika.
Chiratidzo chekurota «siya» - dudziro yakajairwa
Kana kurota kukotsira, vanogona kazhinji kunzwa kurambwa kana kusadiwa. Kutya kunogonawo kuita basa. Nguva dzeichi chifananidzo chemaroto dzinowanzoitika mune akapfuuraizvo zvisina kugadziriswa. Kazhinji yenguva, zviitiko zvehucheche zvinoonekwazve muchiratidzo ichi uye zvinoonekwa panguva yekurara. Uku kungave kurambwa kana kusurukirwa iwe kwawakawana uchiri mudiki.
Nepo mifananidzo mizhinji yemaroto ichiwanzo kuve nemativi akanaka uye asina kunaka, izvi zvinowanzo dudzirwa nenzira yakaipa. Pamwe unogona kupinza uye vazivise matambudziko pavanenge vachirota vachikotsira kana kunetseka nezvazvo. Semuenzaniso, mufaro muhupenyu uye murudo unoodzwa uye hushamwari hunoparadzana.
Asi zvitarise zvakanaka: mavambo nemagumo zvinonzwisisika zvinogara zvichienda pamwe chete. Kana iwe ukapedza chimwe chinhu, unowana chimwe chinhu chitsva, uye izvo zvinowanzove zvirinani kutopfuura chekare.
Mufananidzo wekurota unogona zvakare "kubuda" dambudziko shambadza nehunyanzvi uye basa; Kana kurara kushaya hanya, iwe ungangoita zvisirizvo zvisarudzo zvinogona kuisa yako pfuma munjodzi.
Kushungurudza uye kukakavara zviri zvekare pakati penjodzi dzinogona kumuka kana chiroto chikaratidzwa kuti 'chakasiiwa'. Zvinhu zvinokosha zvinogona zvakare kurasika uye hazvigone kuwanikwa zvakare. Tora zvakanaka zvinhu zvako zvinokosha munguva pfupi iri kutevera!
Nehurombo, iko kusagadzikana kunzwa kwekuti kurara kunokupa iwe kana ichi chiratidzo chekurota chikaonekwa kwauri paunenge wakarara hachiwanzo kutsausa. Panogona kuve nenguva dzakaoma nevakawanda Mibvunzo Kuti uuye kwaari, unofanirwa kutonga. Asi zvese zvinokwanisika uye haufanire kuzvikanganwa: hope dzinongoratidza zviri kuitika mushana yako. Iwe unokwanisa kuziva kutungamira zvinhu munzira yakapesana nenyika inomuka!
Chiratidzo chekurota «siya» - kududzirwa kwepfungwa
Mukududzirwa kwepfungwa kwehope, mufananidzo wekurota wekusara kumashure unotsanangurwa zvakanaka neimwe nzira. Nekuti kana kurota kwacho kukasiyiwa, zvino mhedzisiro yacho haigare ichifanira kunge isina kunaka kwaari. Zvichida kurota kunotsvagawo libertadizvo zvinoratidzwa kuburikidza nemufananidzo uyu wekurota. Naizvozvo, pamwe iwe unogona chete kuzadzisa ichi chinzwa cherusununguko kana wasiyiwa uye nekudaro wakasununguka.
Rusununguko urwu runogona kureva kune ese manzwiro ako uye rusununguko rwako wega kuti pakupedzisira uve zvauri. Kuti uwane dudziro chaiyo yezviroto, saka, mamiriro azvino uye hupenyu hwepamoyo hwechiroto hunofanirwa kugara uchibvunzwa.
Chiroto chiratidzo «siya» - kududzirwa pamweya
Kana kurota kukotsira, saka dudziro yemweya yekududzira inodudzira ichi chifananidzo chehope seichi Urangst yemurume pamberi pekuparadzana.
Kurota Nezve Revolver
Kurota Nezve Xanthippe